अप्रील 24, 2018 जुलाई 18, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments व्रत
यस्तो छ बिहीबार व्रतकथा ! धेरै-धेरै पाहिलेको कुरो हो – एकजना असाध्यै प्रतापी र दानी राजा थियो । ऊ प्रत्येक बिहीवारका दिन व्रत लिन्थ्यो र पुण्यकर्म गर्दथ्यो । यस्तो क्रियाकलाप उसकी रानीलाई मन पर्दैनथ्यो । उसकी रानी न त व्रत नै लिने गर्दथी, न त कसैलाई एक पैसा दान नै गर्दथी । उसका इच्छाले राजाले पनि यी क्रियाकलाप नगरे हुन्थ्यो भन्ने ठान्दथी । एक पटकको कुरा हो राजा शिकार खेल्न वनतर्फ़ गए । घरमा रानी र दासीहरू थिए । त्यस समयमा गुरु वृहस्पति साधुको रूप धारण गरेर राजको ढोकामा देखा पर्नुभयो । साधुले रानीसित भिक्षा मांग्दा ऊ भन्न थाली – हे साधु महाराज । म यस दान र पुण्य भन्ने शब्दसितै घृणा गर्दछु । हजुरले कुनै यस्तो उपाय बताउनु हवस्, जसबाट यी सम्पूर्ण धनसम्पत्ति नाश हवोस्, म यो वैभव समाप्त भएपछि मात्र आनन्दले बस्न पाउछु ।
← यस्तो छ बुधबार व्रतकथा
यस्तो छ शुक्रबार व्रतकथा →
2 thoughts on “यस्तो छ बिहीबार व्रतकथा”
Pingback:यस्तो छ शुक्रबार व्रतकथा | Science Infotech
Pingback:ज्योतिषशास्त्र अनुसार बिहीबार के के काम गर्दा सफलता मिल्छ ? जानी राखौ